Polycarbonate पाना मोटर वाहनमा लागू गरियो - YUYAO JIASIDA SUN PET CO।, लिमिटेड
Polycarbonate पाना मोटर वाहनमा लागू गरियो
समय: 2018-06-23 हिट्स:
पीसी यौगिकहरु को प्रस्ताव को लागी साबित भएको छ 50% गिलासको तुलनामा वजन घटाउनु.
हल्का तौल बाहेक, डिजाइन स्वतन्त्रता बढायो, भाग कन्सोलिडेसन र सुधारिएको कार्यक्षमताले सामग्री छनौट गर्दा मोटर वाहन OEM बीचमा महत्त्व प्राप्त गरेको छ. यी पक्षहरू शैलीको रूपमा बढ्दै गइरहेका छन्, मोटर वाहन डिजाइनमा सौन्दर्य र आराम आरामदायक भएको छ. पीसी कम्पाउन्डहरूले ग्लेजि applications एप्लिकेसनहरूमा प्रयोग हुने परम्परागत सामग्रीहरूमा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रस्तुत गरेको छ. उदाहरणका लागि, रंगीन चमक.
अत्याधुनिक कोटिंग टेक्नोलोजीहरू जुन भन्दा बढि महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रस्ताव गर्दछ 10 आउटडोर जोखिम को वर्षहरु, जुन ग्लेजिंग अनुप्रयोगहरूमा पीसीको लागि निर्धारित गुणस्तर हो, बजारमा विकसित भइरहेको छ. पीसी ग्लेजि systems प्रणालीहरू FMVSS जस्ता ड्राइभर दृश्यताको लागि नियामक आवश्यकताहरू पूरा गर्न र अधिक गर्न आवश्यक छ 205, R43 र JIS R 3211 अमेरिकामा तोकिएको छ, युरोप र जापान क्रमशः. यो सम्भव भएको छ केवल राम्रो संग स्थापित कोटिंग टेक्नोलोजीको साथ.
कोटिंग्स आवश्यकताहरू व्यक्तिगत ग्लेजि। अनुप्रयोगको साथ भिन्न हुन्छन्. उदाहरणका लागि, घर्षण र weatherability आवश्यकताहरु अगाडि विन्डोजहरु बीच भिन्न हुन्छन्, पछाडि विन्डोज र छत अनुप्रयोगहरू, जो बदले उपयुक्त कोटिंग फर्म्युलेशनको माग गर्दछ. Polsiloxane हार्ड कोटिंग प्लाज्मा बढाउने वाष्प जम्मा विधि प्रभावकारी नियामक आवश्यकताहरू साथ साथै OEM मागहरूको लागि पनि प्रमाणित भएको छ।. तथापि, भारी उत्पादन अनुप्रयोगहरूको समर्थन गर्न कोटिंग सुविधाहरू अझै राम्रोसँग स्थापना भएको छैन. यी प्रणालीहरूको लेपको लागत अन्ततः उत्पादनको कुल लागत बढावा दिन्छ र यो बाध्यकारी छ कि निर्माणकर्ताले बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन स्थिति राख्न लागत-प्रभावी कोटिंग टेक्निक स्थापना गर्दछ।. पीसी निर्माताहरु, कोटिंग कम्पनीहरू र अटोमोटिभ OEMs ले ठूलो मात्रामा उत्पादन सुविधाहरू स्थापना गर्न नजिकबाट काम गरिरहेका छन्. केही पीसी कम्पाउन्ड निर्माताहरूले लागत दक्षता प्राप्त गर्न इन-हाउस कोटिंग क्षमता थप्न विकल्पहरूको पनि मूल्या evalu्कन गरिरहेका छन्.
पीसी कम्पाउन्डका लागि भविष्य के हो?
एक पटक कोटिंग टेक्नोलोजी र उत्पादन क्षमतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गरेपछि पीसी कम्पाउन्डहरूको मोटरगाडी ग्लेजि land परिदृश्यमा भविष्यको आशा हुन्छ।. विद्यमान नियामक विनिर्देशहरू र प्लास्टिक आधारित ग्लेजिzing प्रणालीहरूको परीक्षण विधिहरूको संशोधनले विन्डशील्ड ग्लेजि applications एप्लिकेसनहरूमा पीसीको थप प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।. यो भन्दा बढि, अटोमोटिभ OEM को भूमण्डलीकरण र क्षेत्रहरू भरको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सामग्री प्रयोगमा मानकीकरणको आवश्यकतालाई बाध्य पार्दै छ. एक वैश्विक स्तरमा नियामक मापदण्डको तालमेल पिसि यौगिकहरु द्वारा गिलास को प्रतिस्थापन सहायता गर्न सर्वोपरि रहन्छ. प्लास्टिक ग्लेजि materials सामग्रीका लागि उत्तर अमेरिकी मानकहरू सबैभन्दा कडा छन् किनकि उनीहरूले उच्च भारन योग्यता आवश्यकताहरू निर्दिष्ट गर्छन्. मापदण्डको तालमेलले परिणामस्वरूप R requirements को सामग्रीको रासायनिक र मेकानिकल सम्पत्तीमा आवश्यक आवश्यकता बढाउँदछ&D गतिविधिहरू.
ग्लेजि applications एप्लिकेसनहरूमा पीसीको बृहत उत्पादन र प्रयोग दशकको अन्त्यसम्ममा सुरु हुने आशा गरिन्छ किनकि उनीहरूलाई टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा प्रगतिहरूको पर्याप्त स्तर चाहिन्छ।, उत्पादन क्षमता र नियामक मानदण्डको संशोधन. मूल्य श्रृंखला भर मार्केट सहभागीहरू, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता सहित, कम्पाउन्डरहरू, घटक निर्माताहरू, अटोमोटिव OEM हरू बजारमा अवस्थित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न कोशिस गर्दैछन्. सूर्य छानाका लागि पीसी ग्लेजि .को द्रुत अपनन, स्थिर साइड र पछाडि विन्डो अनुप्रयोगहरू आगामी years बर्षमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ जबकि चल पक्ष विन्डोज र विन्डस्क्रीन अनुप्रयोगहरूमा प्रवेश अर्को दशकको अवधिमा मूलधारमा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।.
अघिल्लो : Polycarbonate ठोस पाना उच्च कठोरता बुलेटप्रुफ गिलासको रूपमा प्रयोग
अर्को : पीसी खाली पानासँग अद्वितीय ऊर्जा बचत र वातावरणीय प्रदर्शन छ